Zimbabwe Army Launches Takeover Against ‘Criminals’ Around Mugabe
This screen grab taken early on Nov. 15, 2017 from a television broadcast on the Zimbabwe Broadcasting corporation (ZBC) shows Zimbabwe Major General Sibusiso Moyo (R) reading a statement at the ZBC in Harare. Zimbabwe's military appeared to be in control of the country on Nov. 15 as generals denied staging a coup but used state television to vow to target "criminals" close to President Robert Mugabe.(Dewa Mavhinga/AFP/Getty Images)
HARARE—Zimbabwe’s military seized power early on Wednesday targeting “criminals” around President Robert Mugabe but gave assurances on national television that the 93-year-old leader and his family were “safe and sound”.
Military vehicles and soldiers patrol the streets in Harare, Zimbabwe, Nov. 15,2017. (Reuters/Philimon Bulawayo)
Soldiers stand on the streets in Harare, Zimbabwe, Nov. 15, 2017. (Reuters/Philimon Bulawayo)
President Robert Mugabe talks to General Constantino Chiwenga in Harare, Zimbabwe, July 4, 2008. (Reuters/Philimon Bulawayo/File Photo)
Military vehicles and soldiers patrol the streets in Harare, Zimbabwe, Nov. 15, 2017. (Reuters/Philimon Bulawayo)
The previous day, Chiwenga had made clear the army’s refusal to accept the removal of Mnangagwa—like the generals a veteran of Zimbabwe’s anti-colonial liberation war—and the presumed accession of Grace, once a secretary in the government typing pool.
Zimbabwe President’s wife Grace Mugabe delivers a speech during the Zimbabwe ruling party Zimbabwe African National Union- Patriotic Front (Zanu PF) youth interface Rally on Nov. 4, 2017 in Bulawayo. (Zinyange Auntony/AFP/Getty Images)
A Zimbabwean soldier stands by an intersection as they regulate civilian traffic in front of the High Court of Zimbabwe in Harare on Nov. 15, 2017. (Wilfred Kajese/AFP/Getty Images)